चौथाइवालेको भ्रमण :‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्धलाई नै विकसित गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित – प्रकाशरण महत,नेकां, सहमहामन्त्री « Nepal Page
चौथाइवालेको भ्रमण :‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्धलाई नै विकसित गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित – प्रकाशरण महत,नेकां, सहमहामन्त्री
भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले तपाईंकै निमन्त्रणामा आएका हुन भन्ने छ । यतिनै बेला बोलाउनुको के कारण थियो ?
हो, मेरो निमन्त्रणामा उहाँ (चौथाइवाले) आउनु भएको हो । ‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्ध विकसित गर्न हामीले यताबाट आवश्यक ठानिरहेका थियौं, उताबाट (भारत) पनि त्यस्तै खाले आशय व्यक्त भएको थियो । त्यसैका आधारमा नेपालमा नै बोलाउँ भनेर सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भयो । त्यसपछि मैले निमन्त्रणा दिएको हुँ ।
यो भ्रमणलाई भाजपाको सरकारको प्रतिनिधित्व भन्ने कि पार्टीको ?
पार्टीको हिसावले आउनु भएको हो । सरकारको प्रतिनिधित्व होइन । तथापी सत्तारुढ दल भएकाले सरकार र पार्टीको भावनाबीच सामिप्यता त हुने नै भयो । सरकार र पार्टीको छिमेकीसँगको दृष्टिकोण अलग-अलग हुने कुरा हुँदैन । दुई देशकै सत्तारुढ दलका पार्टीसँग यो भेटघाटले सरकारी तहमा उठाउने मुद्दामा पनि सहजीकरण गर्छ । दुई पार्टीबीच दृष्टिकोण र एक–अर्कालाई बुझ्ने कुरामा सहज बनाउँछ । सम्बन्धमा भएका केही अप्ठ्यारा अवस्थाहरू छन् भने त्यसको समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ भनेरै बोलाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दुई पार्टीबीच भन्दा पनि सरकारी तहमा कस्तो कुराकानी भयो ?
कांग्रेसको नेतृत्वमा भर्खरै नयाँ सरकार बनेको बेला पहिलोपल्ट यो भेटघाट भएको हो । सरकारी तहमा भएको भ्रमण नभएकाले औपचारिक कुराकानी हुने कुरा भएन । सामान्य शिष्टाचारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । नयाँ सरकार आएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन म लागेको छु भनेर भन्नु भएको छ । मुलभूत रुपमा ‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्धलाई नै विकसित गर्ने कुराहरूमा छलफल केन्द्रित भएको हो ।
पछिलोपटक कांग्रेसको सम्बन्ध भारतसँग सुमधुर नभएको चर्चा हुने गरेको छ । अहिलेकै सरकार पनि भारतको चाहना विपरित बनेको भनेर व्याख्या हुने गर्दछ । यही पृष्ठभूमिमा भएको यो भेटघाटको कुनै अर्थ छ कि ?
दुई देशबीच सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको कुरा उहाँ आफैंंले व्यक्त गर्नु भएको छ । पार्टीगत रुपमा भएको यस्तो भेटघाटले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, दुई देशबीच जोडिएका मुद्दाहरूका सवालमा समान दृष्टिकोण बनाउन र सामान्जस्य ल्याउन सहज बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीसंँग भेट्नु अघि मैले नै एक घण्टा जति कुराकानी गरेको थिएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसंँग भेट गराउन मैले नै लिएर गएको हुँ ।
प्रधानमन्त्रीसँग यस्तै कुराकानी भएका हुन् । दुवै पक्षबाट आपसी सम्बन्धमा अकारण समास्याहरू नआओस् भन्नेमा छलफल भयो । एक/अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ भन्ने महसुस भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नकै लागि चौथाइवालेलाई बोलाएको भन्ने चर्चा पनि सुनिने गरेको छ नि ?
सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने कुरा म मान्दिनँ । तर, पनि झन्डै साढे तीन वर्षको कम्युनिष्ट सरकारपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो अवस्था कसरी आयो ? कुन परिवेशमा यो घटनाक्रम अघि बढ्यो ? हामी कसरी सम्बन्धलाई विकसित गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । पार्टी तहमा भएको यो छलफल सरकारी तहमा पनि विस्तार हुन्छ भन्ने लागेको छ । सरकारसँग औपचारिक रुपमा भेटघाट र छलफल हुन्छ । तर दुई सत्तारुढ पार्टीबीचको यो भेटघाटले सरकारकाबीच हुने छलफल र सम्बन्धलाई पनि सहज बनाउँछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा भारतको प्रभाव धेरै रहन्छ भनेर भनिन्छ । कसलाई सभापति बनाउने भन्नेमा पनि भारतको भूमिकाले धेरै असर गर्छ भनेर नेताहरूनै अनौपचारिक रुपमा भन्ने गर्नुहुन्छ । सभापति देउवाले आफ्नो सहजता खोज्न भारतलाई फकाउन खोज्नु भएको त होइन ?
यो मान्छेहरूको अनुमानको कुरा हो । नेपालमा हुने यस्ता भ्रमणले कुनैपनि राजनीतिक दलको अधिवेशन होस् वा सरकारी तहबाट हुने कुनै निर्णय, भारतको प्रभाव हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । कतिपय पार्टीको हकमा होला पनि । जहाँसम्म कांग्रेस पार्टीको कुरा हो, त्यस्तो अवस्था छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन हामी ले गर्ने हो । कांग्रेस अधिवेशनको कुरा आन्तरिक मामिला हो, यसको व्यवस्थापन हामी आफैंले गर्नुपर्छ भनेर हामी आफैंले जोड दिँदै आएका छौ । अधिवेशनको छेउमा समर्थन खोज्न वा बाहिर प्रभाव पार्ने विषयसँग यस भ्रमणको कुनै साइनो र सरोकार छैन ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दिशामा पनि छलफल भएको भन्ने छ नि ?
होइन । यस्तो कुनै कुरा भएन । जुनसुकै प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार आएपनि छिमेकी देशले एउटा तहको सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ । सरकार बन्ने क्रममा उहाँहरूको दृष्टिकोण के थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नभएकाले सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा सत्य होइन । कांग्रेससँग लामो समय औपचारिक सम्पर्क भएको थिएन । पार्टीगत रुपमा पनि भएन । अनौपचारिक रुपमा कसैले भेट्यो होला, कुराकानी भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा भयो । तर, वर्तमान सरकार बनेपछि सरकारी तहमा कुनै भेटघाट भएको छैन । कुटनीतिक सम्पर्कबाट भएका होलान् । प्रत्यक्ष कुराकानी भएको यो नै पहिलोपटक हो ।
‘राखी’ कुटनीतिको कुरा पनि निकै चर्चामा आयो नि ?
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने दिनमा जनै पूर्णिमा पनि परेछ । यो संयोग मात्रै हो । त्यसको अर्को कुनै अर्थ छैन । मैले नै उहाँलाई लिएर बालुवाटार गएको हो । त्यही मौकामा प्रथम महिलाले ‘जेष्चर’को रूपमा राखी बाँधिदिने तय भएको हो । भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै समानता छ । हजारौं वर्षदेखि नै समान अभ्यास पनि छ । धार्मिक परम्परालाई ‘एक्सचेन्ज’ गर्नु राम्रो पनि हो।
कोभिड र भ्याक्सिनका कुराहरू उठेका छन् । प्राविधिक कठिनाइको कारणले रोकिएको छ, चाँडै उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा उहाँले भन्नुभएको छ । हामीले यहाँको वस्तुस्थितिबारेमा जानकारी गराएका छौं ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुने बित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ – उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुइ महिना पूरा भए पनि सरकारले पूर्णता पाउनसकेको
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालसँग तय भएका दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय टोली सोमबार नेपाल
सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तिमा आगामी चुनाव
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा वर्तमान अवस्थाको जानकारी भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ
नेकपा एमाले विभाजनको बिन्दुमा पुगेको छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नयाँ पार्टी गठन
काठमाडौं , २४ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले औपचारिक विभाजनको संघारमा छ ।
एमसिसि टुङ्गो नलागि इपिजि प्रतिवेदन भारतले खोल्दैन – प्रध्युम्न विक्रम शाह परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत
लामो समय यता बिथोलिएको राजनीतिक माहोललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा अब नेपाली कांग्रेसका
गठबन्धनले मृत्युशैया नजिक पुगेको प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई मजबुत बनायो – ऋषि कट्टेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार यतिबेला मुलुकमा छ । नेपाली काँग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र,